Wararkii ugu dambeeyey ee shirka Muqdisho, xubno ku biiri doona & Guudlaawe oo ku wajahan.
Puntlandtimes (Muqdisho)-Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maalintii 2aad ka soconaya shirka wadatashiga doorashooyinka , kaas oo shalay Madaxda uga furmay Xarunta Teendhada Afisiyooni ee Magaalada Muqdisho, kaas oo looga hadlay arrimo dhowr ah.
Kulankii shalay ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka, waxyaabaha qabsoomay, horumarada la sameeyey iyo haddii ay jireen caqabado mudadii bisha ahayd ee ay kala maqnaayeen, halka madaxweynaha Hir-shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo shirkii uga qeyb galay Aalada ZOOMKA, lafilayo inuu soo gaaro Muqdisho.
Maanta oo Talaado ah ayaa waxaa lafilayaa in madaxda ku sugan Muqdisho ay shirkooda diiradda qodobada xiga waxaana ka qaybgeli doona guddiga gaarka ah ee Ra’iisul Wasaaraha u xilsaaray arrmaha doorashada, kuwaas oo Warbixino looga dhageysan doono.
Madaxda ayaa sidoo kale lafiyaa inay sii amba-qaadi doonaan sababta keentay in madaxda ay shiraan, taas oo ku saabsan dib u eegis lagu sameyn doono qodobada qaar ee heshiiskii doorashada, sida qodobka ku saabsan labada Goobood ee loo asteeyay Maamul walba in lagu qabto doorashada.